पूजा शर्माको गुनासो : पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ? – Jagaran Nepal
काठमाण्डौ – नायीका पुजा शर्माले आफुलाई एक जना पत्रकारहरुले अपमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुख ब्यक्त गरेकी छन् । उनले अब कति चुप रहने ? भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् । कलाकारहरुलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अपमानित हुन थालेको भन्दै उनले भावुक स्टाटस लेखेकी छन् ।
अन्तरवार्ताका लागि पत्रकारले बोलाउँदा आउँदिन भनिदिएकै कारण एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममै आफुलाई ‘दारा निस्केको महारानी’ भनेर पत्रकारले सम्बोधन गरेर अपमान गरेको बताएकी छन् । उनले पत्रकार प्रकाश सुबेदीले अपमान गरेको खुलाएकी छन् ।
शुक्रवार निकै भावुक स्टाटस लेख्दै पुजाले उनलाई दिएको अन्तरवार्ताका कारण आफु ट्रोलको सिकार हुनुपरेकाले फेरी अन्तरवार्ताका लागि बोलाउँदा नगएको बताएकी छन् । अन्तरवार्ताका क्रममा आफुले बोलेका केही कुरा एडिट गरेर हटाइदिनु भनेर गरेको आग्रह नमानेर प्रकाशकै कारण आफु ट्रोल बन्नु परेको उनको गुनासो छ ।
उनले लेखेकी छन्, कतिचूप रहने ? कति सहने ? प्राइम टाइममा अन्तर्वार्तामा बोलाइयो गएँ सामान्य ज्ञान संग सम्बन्धित प्रश्न गरियो, अन्तरवार्ता चल्दा चल्दै मैले पत्रकार प्रकाश सुबेदीजी लाइ मैले राम्रो गर्न सकिन प्लिज यो का’टि’दिनुस, भने मान्नु भएन, त्यो चिज प्रसारण भयो भाइरल भयो मेरो थुप्रै ट्रोलहरू बने, आफ्नै गल्ति हो भनेर चूपचाप बसे ।
पछि जब प्रकाशजी ‘एपी वान’मा जानु भो मलाइ पुन अन्तरवार्तामा मा आउ पुजा भनेर भन्नु भो, म मानसिक त’ना’ब झेलिरहेको थिए, अब फेरी पूरानो गल्ति कसरी गर्न सक्थे ? म त्र’सित पनि थिए ,तसैले मैले सरी दाइ म आउन सक्दिन भने । तर त्यसपछि उहॉले आफ्नो कार्यक्रम मा मलाइ लक्षित गरेर “ दारा निस्केको, महानायिका” भनेर शारिरिक हाउभाउ लाइ लक्षित गरेर अत्यन्त क्षु’ब्ध ढंगले प्रस्तुत गरेर मेरो मानहा’नि गर्न कुनै कसर छोड्नु भएन ।
के एक पत्रकारले यस्तो अ’शिष्ट ,अ’भद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ? पत्रकारले गर्न सक्ला मानौ, के टेलिभिजन मा यस्ता अ’सभ्य कुरा सम्पादन गर्ने कुनै निकाए छैन ? हरेक ट्रोलको शि’कार देखि , यस्तो अभद्र व्यवहार प्रति हामि कलाकार सधै मौन नै रहनु पर्ने ? अहिले आएर उहॉले “ मैले कसैको नाम तोकेको छैन “ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ के यसरी पन्छिन मिल्छ ?
म नभए पनि कोहि अभिनेत्री लाइ त ‘दारे अभिनेत्री’ सम्बोधन गरिएकै छ त्यॉहा । हामि कलाकार हरू कहिले सम्म पालै पालो यस्तो अतिबादको शि’कार भैरहने ? हाम्रा गल्ति छन्, होलान् पनि त्यो कुरा पत्रकार मित्रहरू ले औल्याइ दिनु पर्छ तर यो ढंगको प्रस्तुतीकरण ले के पत्रकारिता को पनि इज़्ज़त बढ्छ त ? कृपया सूझाब सल्लाह को अपेक्षा गर्द्छू । यंहाहरूको सल्लाह अनुसार अगाढि बढ्ने छू । धन्यवाद ।।